February 2018 - MoviesFan
မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်မယ့် ထိုင်းမင်းသားချော Puttichai
နောက်ပိုင်း K-Drama တွေသာမက ထိုင်း Drama တွေဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Drama Fan တွေကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Drama Fan တွေကြားမှာ လူကြိုက်များ ရေးပန်းစားခဲ့တဲ့ Drama ထဲမှာ “ပန်းလက်စွပ်” ဇာတ်ကားကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ အဲ့ဒီတော့ “ပန်းလက်စွပ်” လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ဘာကို အရင်ဆုံးပြေးမြင်မိကြလဲ ? ? Admin ကတော့ FB ပေါ်မှာ ပလူပျံခဲ့တဲ့ V day မှာ မင်းသမီး တစ်ယောက်ထဲ Shopping ထွက်တဲ့ အခန်းလေးကို ပြေးမြင်မိပါတယ်။ ?
Drama Fan တွေအတွက်ကတော့ Read More
သရုပ်ဆောင်ဇဏ်ခီကို ပြန်လည်တွေ့ရအုံးမယ် “မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ”
ပရိသတ်တွေအားလုံး စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Mudras Calling ဇာတ်ကားကြီးကို March လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ JCGV အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံကြီးများတွင် ပြသတော့မည့်အကြောင်းကို တရားဝင်ကြေငြာလိုက်ပါပြီ။ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ ရိုက်ကူးထားပြီး အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေကတော့ ဇဏ်ခီနှင့် လှယဉ်ကျေးတို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ Mudras Calling ဇာတ်ကားဟာ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာ
tvN ကနေထုတ်လွှင့်ပြသမယ့် Drama Series အသစ်မှာ Lee Joon Gi ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာသိပြီးကြပြီလား…
၂၀၁၆ မှာ SBS ကနေထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ ‘Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo’ ဇာတ်ကားလေးမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး မိန်းကလေးအရွယ်စုံရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ မင်းသားချောလေး Lee Joon Gi ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့ Confirm လုပ်လိုက်ပါပြီ။
Lee Joon Gi က tvN ကနေထုတ်လွှင့်ပြသမယ့် ‘Lawless Lawyer’ ဆိုတဲ့ Drama အသစ်မှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှာပါ။ သူက ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသား Bong Sang Pil နေရာကနေပါဝင်မှာပါတဲ့ရှင်။ Bong Sang Pil ဟာ ကလေးဘဝတုန်းက သူ့ရဲ့အမေအသတ်ခံရတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး သူ့အမေသေဆုံးရတာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကို ရှာဖွေစုံစမ်းရင်း Read More
မင်းသားချော Ji Sung နဲ့ မင်းသမီးချောလေး Han Ji Min တို့နှစ်ဦး အချစ်ဒရာမာအသစ်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်
Ji Sung နဲ့ Han Ji Min တို့ဟာ tvN ကနေထုတ်လွှင့်ပြသမည့် Fantasy Romance Drama ဇာတ်ကားသစ်လေးမှာ ဇာတ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးနေရာတွေကနေပြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ သူတို့နှစ်ဦးလုံးရဲ့ Agency တွေမှနေပြီး အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ထုတ်လွှင့်ပြသမယ့် Drama ရဲ့နာမည်ကိုတော့ ယခုလောလောဆယ် ‘Knowing Wife’ ဆိုပြီးကြေညာထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးက အရမ်းကို Romance ဆန်လွန်းပါတယ်။ Drama လေးက အက်စီးဒန့်တစ်ခုကိုအမှတ်မထင်ကြုံခဲ့ရပြီး မှော်ဆန်ဆန်စိတ်ဝိဉာန်အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားရတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ အလွဲအချော်လေးတွေနဲ့ အရမ်းကိုရိုမန့်ဆန်တာလေးတွေကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ကြည့်ရမယ့် Drama ပုံစံလေးပါ။
Mark Hamill က Guardians of The Galaxy Vol.3 မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တော့မှာလား
Social Media ပေါ်မှာ တလွဲတွေချည်းမြင်နေရလို့စိတ်ပျက်မိတဲ့အခါတွေလည်းရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မနေ့က Twitter ပေါ်မှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ Star Wars မင်းသားကြီး Mark Hamill နဲ့ Guardians of The Galaxy ဒါရိုက်တာ James Gunn တို့ကြားက conversation လေးကတော့ Social Media ရဲ့ကောင်းကွက်လေးတွေထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ပုံလေးကဒီလိုပါ.. ရုပ်ရှင်ချစ်သူတစ်ဦးက James Gunn ကို သူလက်ရှိဖန်တီးနေတဲ့ Guardians of The Galaxy Vol.3 မှာ Mark Hamill ကိုထည့်သွင်းရိုက်ကူးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ Hamill ရဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့ သူတို့ချစ်တဲ့သရုပ်ဆောင်ကြီးကို နောက်ထပ် Blockbuster ရုပ်ရှင်တွေမှာ မြင်တွေ့လိုတာမဆန်းပါဘူး။ ဆန်းတာက အဲဒီလိုတောင်းဆိုထားတဲ့ tweet ကို James Gunn က ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ reply tweet ထဲမှာ Read More
ချစ်စရာမင်းသမီးချောလေး Kim Yoo Jung ရဲ့ ခွဲစိတ်ဖို့တောင်လိုအပ်လာတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေနေ….?
Kim Yoo Jung ဆိုတဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင်ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ခုဆိုရင် Goyang အထက်တန်းကျောင်းကြီးကနေ ဘွဲ့ရပြီးတဲ့ မိန်းမချောလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။ မင်းသမီးချောလေးဖြစ်လာတာ ဝမ်းသာပေးပေမယ့် ယမန်နေ့ကထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းဟာ သူမရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် စိတ်မကောင်းချင်စရာပါပဲ။
Kim Yoo Jung က ဖေဖော်ဝါရီလ၂၅ ရက်နေ့မှာ သူမရဲ့ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Schedule တွေအားလုံးကို ကျန်းမာရေးအခြေနေကြောင့်ဖျက်ခဲ့ရပါတယ်။ Read More
Drama ကားကြီးတွေကနေ ၂ နှစ်ကြာအနားယူနေတဲ့ So Ji Sub တစ်ယောက်ကို ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ပြန်မြင်ရတော့မည်
သရုပ်ဆောင် မင်းသားချောကြီး So Ji Sub က အသစ်ထုတ်လွှင့်မယ့် Drama Series မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ Ajussi ရဲ့ Agency ကနေ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
So Ji Sub ရဲ့ Agency ကနေပြီး MBC မှထုတ်လွှင့့်ပြသမဲ့ Drama Series အသစ်ဖြစ်တဲ့ ‘Terius Behind Me‘ မှာဇာတ်ဆောင်မင်းသားအဖြစ်နဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှာပါဆိုပြီး ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Read More